ज्यानै लिन सक्छ राम्रा रङमा हुने लिडले – Health Post Nepal
२०७५ कार्तिक ७ गते ९:४२
घर रंगाउन प्रयोग गरिने रङ, सामग्री र खेलौनाहरू बालबालिकामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने कारण बन्दै गएका छन् ।
घर रङरोगन गर्ने पेन्ट्स, खेलौना, लिपस्टिकमा बढी मात्रामा पाइने लिडका कारण स्वास्थ्यमा निकै ठूलो जोखिम थपिरहेको छ । यस्ता सामग्री प्रयोग गर्दा हावा तथा धुलोका कणबाट श्वासप्रश्वास, खाना तथा अन्य माध्यममार्फत लिड शरीरभित्र पुगेपछि रगत संक्रमित हुन्छ र असर देखापर्न थाल्छ ।
सरकारले ५ असारमा नयाँ मापदण्ड ल्याएर पेन्ट्समा ९० पिपिएमभन्दा कम लिड प्रयोग गर्न भनेको छ । रगतमा लिडको मात्रा बढी हुँदा बालबालिकामा पेट दुख्ने, खान मन नलाग्ने, मानसिक विकास रोकिने, कब्जियत, रक्तअल्पता र मिर्गौला फेलसमेत गराउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार लिडका कारण संसारभर प्रत्येक वर्ष ६ लाख बालबालिका अपांग हुन्छन् । तीमध्ये १ लाख ४३ हजारको मृत्यु हुन्छ । एक तथ्यांकअनुसार लिडको सम्पर्कबाट हुने दीर्घकालीन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूले बर्सेनि ८ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
धनी र सम्पन्न परिवारको तुलनामा गरिब परिवारको बच्चामा साढे ३ गुणा बढी र घरभित्र भन्दा बाहिर खेल्ने बच्चामा साढे ४ गुणा बढी लिडको एक्पोजर हुने अध्ययनले देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार लिड (सिसा) विश्वव्यापी रूपमा जनस्वास्थ्यलाई असर पुर्याउने प्रमुख १० रसायनमध्ये एक घातक रसायन हो ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने रङहरूमा लिडको मात्रा बढी छ । पेन्ट्समा २ लाख १३ हजार पिपिएमसम्म लिड हुन्छ । नेपाली पेन्ट्समा १४ सय गुणा लिड पाइन्छ । सरकारले ५ असारमा नयाँ मापदण्ड ल्याएर पेन्ट्समा ९० पिपिएमभन्दा कम लिड प्रयोग गर्न भनेको छ ।
रगतमा लिडको मात्रा बढी हुँदा बालबालिकामा पेट दुख्ने, खान मन नलाग्ने, मानसिक विकास रोकिने, कब्जियत, रक्तअल्पता र मिर्गौला फेलसमेत गराउन सक्छ । यसका साथै बालबालिकाले रिसाउने र एकान्त मन पराउनेजस्ता असामान्य आनीबानी देखाउँछन् । लिडले बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा असर पुर्याइरहेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले केही वर्षअघि उपत्यकाका बालबालिकाको रगतमा लिडको मात्रा जाँच गरेको थियो । लिडजन्य सामग्री र खेलौनाका कारण बालबालिकामा असर बढ्दै गएको परिकल्पनामा परिषद्ले अनुसन्धान गरेको थियो । परिषद्का प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. मेघनाथ धिमालका अनुसार नेपालका औसत बालबालिकामा लिडको मात्रा न्यूनतम सीमाभन्दा धेरै बढी र तत्काल अस्पताल भर्ना गरिहाल्नुपर्ने तहभन्दा केही मात्रै कम छ ।
अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी)का अनुसार रगतमा लिडको मात्रा ५ मिलिग्राम प्रतिडेसिलिटरभन्दा बढी हुनुहुन्न । ४५ भन्दा बढी भए अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ । सयभन्दा बढी भए तत्काल मृत्यु हुन्छ ।
अध्ययन गरिएका बालबालिकामध्ये ९.३ प्रतिशतको रगतमा मात्र लिड शून्य थियो । २६ प्रतिशतमा शून्य दशमलव १ देखि ५ मिलिग्राम प्रतिडेसिलिटर र अन्यमा झन्डै अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थानजिक थियो ।
लिडको सम्पर्कमा आउँदा वयष्कभन्दा बालबालिकामा असर बढी हुन्छ । सहरीकरणसँगै रङको प्रयोग बढ्दा लिडको असर पनि बालबालिकामा बढिरहेको छ । धुलोमा बढी खेल्ने बालबालिकामा पनि लिड धेरै पाइएको छ ।
लिडले स्नायु प्रणाली, मस्तिष्क, मिर्गौला, आइक्यु विकास, हाडजोर्नी र मासु वृद्धिमा सबैभन्दा बढी असर पार्छ । त्यसैगरी, बच्चामा तौल घट्दै जाने, कब्जियत र कमजोर हुने समस्या त्यतिकै देखिन्छ ।
अमेरिकी सरकारले अस्पतालका वार्ड, विद्यालय र घरमा १० माइक्रोग्राम प्रतिवर्गफिटभन्दा बढी लिड भेटिए आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्छ । विज्ञहरूका अनुसार लिडले मन्दविषका रूपमा असर गर्छ ।
One thought on “ज्यानै लिन सक्छ राम्रा रङमा हुने लिडले”
Dr gaurang says:
China ma bane ko khilauna ma lead ko matra Nepal bhanda dherai badi bhayeko ma USA le pratibandh lagai sakeko tara Nepal ko sarkar lai yo himmat huna sakchha? Sarkar lai jhara pakhala laagi haalchha jaanchh garauna ma matarai